1. सुन्दर रंगीन क्यान्डी रिच स्वाद बिभिन्न सामग्रीहरूको साथ तर जब ती सबै सँगै मिल्दछन्, हामी फजको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। एक मेनू जुन धेरै मानिसहरूले सोच्न सक्दछ कि यो गाह्रो छ। र जोखिम लिन चाहँदैन तर यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस्, यो सजीलो बनाउन मेनु हो। चाहेको र जटिल छैन यो एक मिठाई हो कि बच्चाहरूले पछाडि नचढिकनै फेरि खानु पर्छ। त्यस पछि, आऊ र सँगै रमाईलो गर। सँगै फज बनाउने विधिसँग जो कोही पनि गर्न सक्दछन्। वास्तवमा, मिठाई बाहिरी भागमा क्रिस्पी बनावटको साथ र भित्रि नरममा। चकलेट र दूधको मिश्रणको साथ मिठाईको बनावट, फज बनावटको रूप भन्न सकिन्छ यो तपाईं एक नरम र चिल्लो स्वाद दिनुहुनेछ, स्वादिष्ट चकलेट स्वाद र वास्तविक फज संग लुकाइएको, कुनै जटिल प्रक्रिया र अवयव छैन। यो डेजर्ट हो जुन बच्चाहरूले सबैभन्दा बढी माया र प्रेम गर्दछन्। त्यस पछि, सामग्रीहरू तयार गरौं। साधारण सामग्री र उपकरण, तर स्वाद असाधारण छ।
2. फज कस्तो किसिमको मिठाई ठ्याक्कै मिल्छ? १ मिठाई गाढा दूधको (१ o औंस)
3. Ch कप दूध चकलेट चिप्स
4. तरकारी तेल वा माखन संग स्प्रे
5. लाडले क्रोकरी
6. चकलेट ट्रे
8. कसरी फज, स्वादिष्ट, चिपचिपो मिठाई बनाउने; bowl मीठो कन्डेन्स् दुधलाई तयार भाँडामा हाल्नुहोस्। • त्यसपछि दूध चकलेट चिप्स कचौरामा हाल्नुहोस्। • त्यसपछि सामग्रीहरू सँगै मिलाउनुहोस्। • त्यसोभए विधि सजिलो छ। उच्च गर्मी मा माइक्रोवेव मा राखिएको छ यसले करीव १ मिनेट लिन्छ। prepared फ्रायड पेपरलाई प्यास्ट्री ट्रेमा काट्नुहोस्। त्यसपछि तरकारी तेल स्प्रे वा एक सानो unsalted बटर लागू गर्नुहोस्। ताकि चकलेट फ्रायडमा टाँसिदैन यसलाई हटाउन सजिलो बनाउनको लागि।
9. • त्यसपछि तयार प्यान वा मोल्डमा चकलेट हाल्नुहोस्। अनुहार चिल्लो पोंखाउन फ्याँक्न प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि फ्रिजरमा मिश्रण २ घण्टा राख्नुहोस् जब सम्म यो पूर्ण रूपमा स्थिर हुँदैन।
10.2२ घण्टा फ्रिज हुँदा, मोल्डबाट हटाउनुहोस्। त्यसपछि बाहिर लैजानुहोस् र वर्ग पट्टि काट्नुहोस् वा काट्ने आकारको टुक्राहरूमा काट्नुहोस् जब आईसिंग चिनीको साथ प्रस्तुत गरिन्छ। वा थोरै चिनी फ्लेक मीठो स्वाद बनाउनको लागि यसलाई फजको शीर्षमा राख्नुहोस्। केवल यो स्वादिष्ट छ। फज एक खाजा हो जुन पार्टीको लागि अग्रिम तयारी गर्न सकिन्छ। किनभने यो फ्रिजमा भण्डार गर्न सकिन्छ विशेष गरी बच्चाहरूसँगको पार्टीहरूमा वा डिनर पछि मिठाईको थालको रूपमा। त्यो सजिलो सेवा र मीठो स्वाद को लागी लिएको छ वा कफी र चिया सत्रको समयमा अतिथिहरूको सेवा दिन, जुन लगभग सबै प्रकारको तातो पेय पदार्थसँग मिल्दो छ थप रूपमा, आफैंमा यो गर्न सक्षम हुनु पनि स्वादिष्टता र सम्पूर्ण अनाज, नट वा सुक्खा फलबाट लाभहरू थप्न सक्दछ। वरपरका चीजहरूबाट यसलाई अनौंठो फज बनाउनुहोस्, त्यसो भए पाहुना वा पार्टीहरूको लागि फ्रिजमा फज बनाउनुहोस् !!